काठमाडौँ, पुस ११ गते । कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न खोपलाई प्राथमिकता दिँदै आएको नेपालले हालसम्म दुई करोड १२ लाख मात्रा खोप लगाइसकेको छ । तीमध्ये पहिलो मात्राको खोप लगाउनेको सङ्ख्या एक करोड ३३ लाख ९९ हजार ६०७ छ भने पूर्ण खोप प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या ९४ लाख ५० हजार रहेको छ । नेपालले गत माघदेखि खोप लगाउन थालेको हो ।
यी खोप हालसम्म तीन करोड ३२ लाख ९० हजार ३३० मात्रा आइसकेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले सरकारले एक करोड २० लाख खोप खरिद गरेको र बाँकी खोप कोभ्याक्स सुविधा, विभिन्न मुलुकबाट सहयोगका रूपमा प्राप्त भएको बताउनुभयो । उहाँले सबै नेपालीलाई आगामी चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउने काम सम्पन्न गर्न सरकारले थप खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ भने विभिन्न मुलुकसँग खोप सहयोगका लागि पहल गरिएको बताउनुभयो । सरकारले विभिन्न स्थानमा रहेको खोप भण्डारमा करिब ६८ लाख खोप सुरक्षित रहेको बताएको छ । यही पुस महिनासम्म १८ वर्षभन्दा माथिको ६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या र चैत महिनासम्म सबैलाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्यसाथ सरकारले काम गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग सहयोग, समन्वयका लागि आग्रह गर्नुभएको छ । सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग बैठक गरेर कोरोनाबाट नागरिकलाई बचाउन खोप अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक आर्थिक र जनशक्ति उपलब्ध गराउन केन्द्रीय सरकारका अर्थ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ ।
प्रदेशहरूमा खोप अभियानको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा बढी खोप लगाइएको देखिएको छ । बागमती प्रदेशमा पहिलो खोप लगाइएको जनसङ्ख्या ७५ प्रतिशत रहेको छ भने दुवै मात्राको खोप लगाउने ६१ प्रतिशत छन् ।
सबैभन्दा कम खोप लगाउने प्रदेश २ मा छन् । मन्त्रालयका अनुसार सो प्रदेशमा पहिलो खोप लगाउने ३९ प्रतिशत छन् भने दुवै खोप लगाउने २४ प्रतिशत छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले प्रदेश २ मा खोप कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसके सरकारले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्यमा पुग्न मुस्किल हुने बताउनुभयो ।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा पनि खोप लगाउनेको सङ्ख्या कम छ । कर्णाली प्रदेशमा पहिलो मात्राको खोप लगाउने ४७ प्रतिशत र दुवै खोप लगाउने २७ प्रतिशत छन् । त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो मात्राको खोप लगाउने ५५ प्रतिशत र दुवै मात्राको खोप लगाउने ३५ प्रतिशत छन् । सचिव डा. पोखरेलले दुवै खोप समेटेको स्थिति हेर्दा प्रदेश १ मा ४४ प्रतिशत, गण्डकीमा ६४ प्रतिशत र लुम्बिनीमा ४० प्रतिशत रहेको बताउनुभयो ।